हामी विश्वास गर्छौं, प्रकाशको पुस्तकमा अगमवाणी गरिएको ठूलो सेतो सिंहासन अविश्‍वासीहरूलाई लक्षित गरिएको हो जो शैतानको स्वामित्वमा छन्। जब प्रभु आउनुहुन्छ, उहाँमा विश्‍वास गर्नेहरू स्वर्गमा उठाइ लगिनेछन्, त्यसपछि प्रभुले अविश्‍वासीहरूलाई नाश पार्नका लागि विपत्तिहरू बर्साउनुहुनेछ। यही नै ठूलो सेतो सिंहासनको न्याय हो, तैपनि तपाईं परमेश्‍वरको आखिरी दिनहरूको न्याय सुरु भइसकेको छ भनी गवाही दिनुहुन्छ। त्यसोभए परमेश्‍वरले अविश्‍वासीहरूलाई नाश पार्नका लागि विपत्तिहरू बर्साउनुभएको हामीले किन देखेका छैनौं? यो कसरी ठूलो सेतो सिंहासनको न्याय हुन सक्छ? | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
अघिल्लो: क्रूसमा, प्रभु येशूले भन्नुभयो, “यो सकियो” (यूहन्‍ना १९:३०), यसरी मानवजातिलाई मुक्ति दिने परमेश्‍वरको काम पूरा भएको प्रमाणित गर्नुभयो। हामीले प्रभु येशूमा विश्‍वास गर्ने भएकाले, हाम्रा पापहरू पहिले नै क्षमा गरिएका छन्, र हामी आफ्नो विश्‍वासद्वारा धर्मी ठहरिएका छौं। जब प्रभु आउनुहुन्छ, हामी सीधै स्वर्गीय राज्यमा उठाइलगिनेछौं। परमेश्‍वरले अझै पनि किन सत्यता व्यक्त गर्ने र मानिसको न्याय र उसलाई शुद्ध पार्ने काम गर्नुपर्छ र?
अर्को: हामी विश्‍वास गर्छौं, त्यो ठूलो सेतो सिंहासनको न्यायले परमेश्‍वरले स्वर्गमा सजाउनुहुने त्यो ठूलो टेबललाई सङ्केत गर्दछ, जहाँ प्रत्येक व्यक्तिले घुँडा टेकेर आफ्नो सम्पूर्ण जीवनमा गरेका पापहरू स्वीकार गर्छन्, त्यसपछि परमेश्‍वरले तिनीहरू स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्नेछन् कि नरकमा खस्नेछन् त्यो निर्णय गर्नुहुन्छ। यस बीचमा, तपाईं परमेश्‍वर देह बनेर पृथ्वीमा आउनुभएको छ र उहाँले सत्यता व्यक्त गर्दै हुनुहुन्छ र आखिरी दिनहरूको न्यायको काम गर्दै हुनुहुन्छ भनी गवाही दिनुहुन्छ। यो हाम्रो आफ्नै बुझाइभन्दा फरक किन छ? आखिरी दिनहरूमा हुने परमेश्‍वरको न्याय भनेको के हो?